Caymiska Badda iyo Shilalka ka dhacay Imaaraadka Carabta | Shirkadaha Sharciga ee Dubai
Caymiska Marinalka iyo Shilalka ee Imaaraadka Carabta
1 Comment	/ blog, kiisaska maxkamada, shirkadaha sharciga ee dubai, Dhaawaca Personal / By Sarah
Caymiska iyo shilalka badda ee Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Imaaraadka Carabta
Caymis kasta waxaa loogu talagalay inuu kormeero khatarta haddii ay dhacdo dhacdooyin khatar ah sida waxyeelada guriga iyo xaaladda, shil ama dhimasho. Marka la eego Gaadiidka, dhirbaaxadu way sarreeyaan maadaama dhammaan qaybaha ay ku hawlan yihiin hawsha. Tusaale ahaan, khatarta ka iman karta xamuulka faa'iidada leh ama maraakiibta faraha badan, khatarta waxyeellada dhulka sababtoo ah faddaraynta saliidda iyo khatarta luminta dhacdooyinka qiimaha badaha ee shilalka.
Si loo hubiyo in dhammaan khatarta la kormeero iyada oo aan la helin hantida la xariira lacageed marka loo baahdo, caymiska aan caadiga ahayn ee badda loo sameeyo ayaa lagama maarmaan u ah doonyaha iyo milkiilayaasha doonka inay qaataan. Kaliya dib u dir, caymiska waxaa laga dhigi karaa maraakiibta. Noocyada caymiska badda ee la heli karo faa'iidada macmiilku waa tiro badan oo mid kasta oo ka mid ah ayaa la gaari karaa hab gaar ah.
Marka si looga garaabo dekedaha waaweyn ee Imaaraatka, markabku waa inuu lahaadaa qolof iyo qalab iyo hubin iyo daboolida ilaalinta lacag celin. Heerka baaxadda lama amrayo wuxuuna mas'uul ka yahay ikhtiyaarrada dekedaha.
Waxaa jira dhowr nooc caymis oo shidaal ah iyo noocyada shilalka kuwaas oo siinaya noocyada ilaalinta mulkiilaha maraakiibta, milkiilayaasha xamuulka iyo charterers.
Subrogation waa mudnaanta caymis dib u soo celisay dammaanad, inuu ku sii jiro kabaha damaanad qaadkiisa iyo sheegashada ka soo horjeedda dhinacyada saddexaad ee la isku halleyn karo. Xuquuqda dammaanad qaadka ee dib-u-bixinta qorshooyinka dib-u-dhigista ma baabi'inayso dammaanadda damaanad qaadka ee ka sheegashada dhinacyada saddexaad ee qaddarinta luminta
Subrogation-ka, dib-u-soo-kabasho kasta oo la sameeyo waxay faa'iido u tahay bixiyaha shabakadda badbaadada, sikastaba ha noqotee illaa heerka soo-celinta la bixiyay. Mudnaanta caymiska ee sharciga Imaaraadku wuxuu dejiyey Qodobka 1030 ee CC.
Xaddidaadda dhinaca midig ee Subrogation
Caymis bixiyuhu ma soo ceshan karo wax ka badan cabirka magdhawga la bixiyay. Haddii ay dhacdo in bixiyaha shabakadda badbaadadu uu wax badan soo celiyo, waa in lagu siiyaa dammaanadda.
Xuquuqda Caymisku kama ballaadhnaan doono kuwa la dammaanad qaaday. Tusaale ahaan, haddii heshiiska dammaanad qaadka ah ee lala galayo cidda saddexaad ee la isku halleyn karo ee mas'uuliyadda dhinaca saddexaad markaa xaddidyada noocaas ah ay khuseeyaan bixiyaha shabakadda badbaadada.
Sida ku xusan Qodobka 1030 ee Xeerka Madaniga ah, qorshaha kaydintu ma keeni karo sheegasho la hoos geliyey ama ka soo farcantay dammaanad qaadka, ama qof dammaanad qaadku awood u leeyahay.
Habka Qormo 1030 loo diyaariyey waa dhammaan xisaabaadka isku xira shakhsiyaadka dammaanad qaadaya, halkii ay ka mid noqon lahayd shirkad.
Shilalka Gaadiidka gaar ahaan shilalka iyo wasakheynta gudaha UAE
Iskuxidhka waxaa xukuma qodobbada 318 ee 326 ee Sharciga Badda Ganacsiga. Taabashadu waxay la mid yihiin kuwa ka mid ah Heshiiska Collective 1910.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale ku heshiiyey Shuruucda Caalamiga ah ee Ka-hortagga Khariidadda ee 1972.
Waxyeellada kale ee dabiiciga ah ee keena markab
Xaaladda badda waxay xaqiijinaysaa Sharciga Federaalka ee Ilaalinta iyo Horumarinta Deegaanka (24 / 1999).
Dhammaan weelasha ku soo gala gobollada badda ee UAE waa inay haystaan ​​Shahaadada Caalamiga ah ee Shidaalka Diyaarinta Hubinta Shidaalka ee Shidaalka ah waana inay sii wadaan wacyigelin ku saabsan taariikhda iyo aagga laga soocay muck.
Qof kasta oo waxyeello u geysta xaaladda badda ee si aan macquul ahayn ama si ula kac ah u dillaacsan 24 / 1999 wuxuu mas'uul ka yahay kharashka daaweynta ama ka-daadinta waxyeelada iyo natiijooyinka soo socda.
Jebinta Sharciga 24/1999 waxay keeni kartaa ganaaxyo illaa Dh500, 000 iyo illaa shan sano oo xabsi ah.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta sidoo kale waxay sidoo kale isku soo uruuriyeen lifaaqa I ee V ee Heshiiska Caalamiga ah ee Ka-hortagga Khashinka Dabiiciga ah.
UAE waxay ka xayirtay Heshiiska Caalamiga ah ee Badbaadinta 1989 ee 1993 kasta. Samatabbixinta waxaa lagu daraa Qormooyinka 327 ee 339 ee Sharciga Badda ee Ganacsiga.
Sida ku cad Qodobka 8 ee Sharciga Badbaadada Ganacsiga, Heshiiska Caalamiga ah ee Badbaadinta 1989 ayaa ku guulaystay halka labada maamuladu isku dhaceen.
Mudnaanta magdhowga samatabbixin wax ku ool ah mas'uul kama aha caddeyn ku xirnaan sharci ah.
Wax magdhow ah looma bixin karo tuubo caadi ah ama tijaabin ama dadka isdifaacaya.
Dheeraad ah, ma jirto wax gunno ah oo magdhow ah haddii gidaarka la gooyey diidey caawimaad sababo macquul ah.
Cabbiraadda magdhawga waxaa xukuma maxkamadda awoodda leh, haddii aan dhinacna la dhicin.
Ka saarida xadhigga
Heerkee iyo istiraatiijiyado noocee ah ayaa lagu dabaqayaa ka bixitaanka waraaqaha ku yaal xuduuddaada?
Imaaraadku qayb kama aha Heshiiskii Ka-Qaadista Burburkii Nairobi 2007 iyo daadgureynta burburka si cad uma maamusho sharciga Imaaraadka.
Xaaladahee ayaa loo ogolyahay in khubarada ay amar ku bixiyaan in laga eryo burburka?
Ma jirto jihada loo dajiyay cayrinta, laakiin khabiirada ayaa laga yaabaa in lagu dhajiyo awood ballaadhan oo ay ku amraan inay bixiyaan daadguraynta.
Caymiska Marinnada iyo shilalka waxay dabooli doonaan khasaaraha ama waxyeelada alaabtaada markaad safar ku mareyso hawo, waddo iyo badda. Hay'adaha caymisku waxay bixin karaan qorshe Marine Cargo si ay isku duwaan ganacsigaaga gaarka ah. Waxay kaloo la mid noqon karaan macaamilada sanadle ah ee ilaalinta safarka oo macquul noqon doonta shakhsiyaadka leh horumarinta guud ee koritaanka alaabta ee UAE.
Waxaa jira noocyo faafin si aad u eegto in aad ku tiirsanaato fikrada culeyska. Ugu dambeyntii, kala duwanaanta heerarka caadiga ah ee faafaahinta kale ee loo habeeyay si loo waafajiyo baahida kala duwan ee macaamiisheena.
1 wuxuu ka fikiray "Caymiska Badda iyo Shilalka Imaaraadka Carabta"
Qareenada khubarada ah
May 7, 2019 at 6: am 31
Iskuduwaha unugyadu waxay u badan yihiin shilalka badda waxayna badanaaba dhacaan markii ay ku dhacaan markab kale oo biyo ah (oo hoos u dhacaya) ama walxo wali jira. Shilalka noocan oo kale ah waxay la xiriiri karaan maraakiibta madadaalo sida doonyaha iyo doomaha dheereeya ama maraakiibta ganacsiga sida maraakiibta shixnadaha iyo kuwa xamuulka qaada.
Shuruucda Dhaxalka Hantida ee Dubai ee loogu talagalay Qurbajoogta iyo kuwa aan Muslimka ahayn: Maxaad Ka Taqaan Xuquuqda Dhaxalka?